Spotify inotangisa nhoroondo yemhuri inosvika kuvanhu vatanhatu pamamirioni e6 pamwedzi | Ndinobva mac
Spotify inotangisa nhoroondo yemhuri inosvika kuvanhu vatanhatu pamamiriyoni e6 pamwedzi
Iyo yeSweden yakasimba Spotify yatora nguva yakareba kuti ipindure kuakaundi yemhuri iyo Apple Music inotipa, matinogona kusanganisira inosvika mashanu nhengo dzemhuri yedu kuti tikwanise kunakidzwa neApple Music kweana 5 euros pamwedzi. Kubva kuvhurwa kweApple Music, Spotify yakachengeta zvirongwa zvemhuri zvinodhura, Zvirongwa zvekuti chinhu chega chavakawana kuunza vashandisi padyo neApple Music nekuda kweichi chakanakisa chirongwa chemhuri, umo mushandisi wega wega anogona kuve neakazvimirira uye akasarudzika manyorerwo.
Spotify yakatanga nezuro chirongwa chayo chitsva chemhuri umo ichabvumidza vashandisi vepuratifomu kuti vaihaye uye nakidzwa kusvika kuvanhu vatanhatu panguva imwe chete ye14,99 euros, imwe kupfuura chirongwa chemhuri chaApple. Kubva zvakauya Apple Music, mapuratifomu ese ari maviri ari kutonga misika yemumhanzi, zvichisiya mamwe makambani seRdio kana Line Music padivi penzira, kunyangwe iyo yekupedzisira isina kumbobvira yabvisa kubva pakatora kambani yeJapan mushure mekutengwa neMicrosoft iyo imwechete Nokia package uye iine Groove Music, yanga isingadi kuchengetedza masevhisi maviri zvakafanana.
Apple parizvino ine hwaro hwakasimba hwevamiririri vane mamirioni gumi nematatu nepo Spotify ine mamirioni makumi matatu evashandisi uye ichikura. Kubva pakatanga kambani yeCupertinoino Apple Music, zvinoita senge yave iri pfuti yekutanga yenzira nyowani yekupedza mimhanzi yekutenderera. Dambudziko chete naSpotify nderekuti parizvino haripi yekuzvarwa kunyorera yeApple Watch, chimwe chinhu chingave chikonzero chakaringana chevashandisi vepuratifomu kuti vatendeukire kuApple Music, kunyanya kana vari vatengi vanorema vemimhanzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Spotify inotangisa nhoroondo yemhuri inosvika kuvanhu vatanhatu pamamiriyoni e6 pamwedzi
Iko runyerekupe rwakatangwa naMing-Chi Kuo nezveMacBook Pro nderechokwadi?
10 maapplication e $ 22 ndizvo izvo BundleHunt inotipa